2020လောက်ကျရင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖူးစာဖက်ရှာကြဦးမှာပါလိမ့်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » 2020လောက်ကျရင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖူးစာဖက်ရှာကြဦးမှာပါလိမ့်။
2020လောက်ကျရင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖူးစာဖက်ရှာကြဦးမှာပါလိမ့်။
Posted by moonpoem on Aug 11, 2011 in Think Different | 18 comments
ကျွန်မတို့ ဘိုးဘွားခေတ်တွေတုံးကပေါ့ ကျွန်မအဘိုးက ကျွန်မအဘွားကို ရဖို့ ၃နှစ်၃မိုးတောင် မဟုတ်ဘူး။ ၄နှစ် ၄မိုးကြိုးစားရပါတယ်တဲ့။
ချစ်သူဖြစ်ပြန်တော့ တစ်ခါတစ်ခါတွေ့ ဖို့ တော်တော်စောင့်ရတယ်တဲ့။ မိုးတွင်းရေကြီးနေတာတောင် ညနေဘက်ချိန်းရင်
လှေမအားတဲ့အခါ ရေကူးပြီး သွားတွေ့ ရသတဲ့။ ရေကူးပြီး သွားတော့ ဖျားမှာစိုးလို့ အဘွားက နာရီဝက်ထက် ပိုပြီး တွေ့ ခွင့်မပေးပါဘူး။ သူတို့ တွေ ချစ်သက်တမ်း ၄နှစ်အလွန်မှာ နှစ်ဘက်မိဘတွေ ဖွင့်ပြောပြီး အဘိုးကအဘွားကို လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးပေါင်း အဘိ်ုးက အဘွားကို လက်ထပ်ခွင့် ရဖို့ ၈နှစ် အချိန်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မအဖေကျတော့ တက္ကသိုလ်မှာ မေမေနဲ့ တွေ့ ပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ ဖွင့်ပြောပြီး ဒုတိယနှစ်မှာ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်
ကျောင်းပြီး တစ်နှစ်နေမှလက်ထပ်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့ အားလုံးပေါင်း ၅နှစ်ပေါ့နော်။
(အဘိုးတို့ အဘွားတို့ အဖေတို့ အမေတို့ ရေ ခွင့်လွှတ်ကြပါ သမီးကတော့ သမိုင်းကြောင်းတွေ အကုန်ဖော်ပြီးသွားပြီ။)
အဲ ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့ မနေ့ ကရည်းစားစကားပြော တစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ရည်းစားဖြစ်(တချို့ လည်း တစ်ပါတ်တောင်
မကြာဘူးတဲ့)။ လွယ်လွယ်တွေ့ လွယ်လွယ်ချစ် မြန်မြန်ကွဲ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တွဲဆိုသလိုခေတ်ကြီးကလည်း တိုးတက်မြန်ဆန်
ရည်းစားထားတာလည်း ခေတ်နဲ့ အမီ တိုးတက်နေကြပါပြီ။ အင်တာနက်ကနေမတွေ့ ဘူး မမြင်ဘူးဘဲနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ကြတာတွေကိုလည်းကြားဘူးနေတော့ အံ့သြမိပါတယ်။ အင်းလာမယ့်2020လောက်ကျရင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဖူးစာဖက်ရှာကြဦးမှာပါလိမ့်။
အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာနေ၀င်းမြင့်က စင်ကာပူစာပေဟောပြောပွဲမှာ ဟောသွားပါတယ်
နှစ်တွေကြာညောင်းပြီးမှဖြစ်တည်လာတာလဲအချစ်ပါဘဲ ၊ခုမြင်ခုချစ်ပေမယ့်လဲ ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်တွေရှိပါသေးတယ်။သံယောဇဉ်ဆိုတာအင်မတန်ဖြူစင်လွန်းပါတယ်။တကယ်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရင် အချိန်အတိုင်းဆိုတာ ကန့် သတ်ချက်တခုပါ။တကယ် လူသားပီသခဲ့ရင် မိမိ စိတ်ကိုမိမိ တန်ဖိုးထားတတ်ရပါမယ်
အွမ်…………..2020 က အဝေးကြီးလိုသေးတယ်ဂျ…….
ခု ဖြစ်နေတာက………online မှာ ခုသိ ခုကြိုက် ခုလိုက်ဖြစ်နေတာ………
2020 အတွက် တွေးရဲဘူးဂျ…….
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ ဟူးးးးး ရင်လေးပါတယ် …….
ကြောင်ကြီးတို့များ လကဗျာ မိဘဘိုးဘွားတွေထက် နှစ်ဆသုံးဆမက စောင့်တာတောင်
ဩော်ကြွားနိုင်သူတွေ ကြွားကြပါစေ ကြောင်ကြီးမေတ္တာဝေသည်…။
2020ကျလျှင် မျက်စောင်းတချက်လေး ထိုးထာနဲ့ ..အခန်းတည်း တန်းေ၇ာက်ေ၇ာ
မျက်ဝန်းလေး တစ်ခက်အဝင့် မျက်တောင်တစ်ခတ်လေးအတွင်းမှာ အခန်းထဲ တန်းရောက်သွားမယ့် သဘောလားဟင် ….
ဟုတ်တယ်မအိတုံနဲ့ မနွယ်ပင်ထင်တာဖြစ်နိုင်တယ်နော် ။ ဆုတ်ကပ်ရောက်နေတဲ့ကမ္ဘာဆိုတော့လည်း ….
အဘိုးအဘွား မိဘတွေအကြောင်းတော့ ပြောတယ် လကဗျာ လေးကရော အတွေ့အကြုံလဲ လုပ်ဦးလေ
အဘိုးအဘွားက၈နှစ်၊ အဖေအမေက၅နှစ်၊ လကဗျာကရော၊ ၅နှစ်လား… ၅လ လား.. ၅ရက်လား… ၅မိနစ်လား……
၅ စက္ကန့်လို့တော့ မပြောနဲ့နော် …..
ကျွန်တော်ကျတော့ ပထမတစ်ယောက်ကို ..
ဖွင့်ပြောပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ အဖြေပြန်ရ
လက်တွဲချိန်က ၂ နှစ်ခွဲကျော်ကြာ
ဖွင့်ပြောပြီး ၅ လ ကျော်မှ အဖြေပြန်ရ
ချစ်သူအဖြစ် ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်က သုံးပတ်သာ ရှိသေး …
ကြုံတုန်း ကြွားရတာ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ
အွန်လိုင်းကနေ ဖူးစာရှင်ရှာကြတာ တော်တော်လေးခေတ်စားနေတယ် …
ကျွန်မ အိမ်ရှေ့အိမ်က ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဂျပန်မှာအလုပ်သွားလုပ်ရင်း ရုရှားက စစ်ဗိုလ်လေးနဲ့အင်တာနက်ကနေကြိုက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြတယ် ….
သေချာလဲ အကြောင်းမသိကြပဲနဲ့ ရေရှည်ဘယ်လိုများပေါင်းသင်းကြမလဲလို့ ရင်လေးမိတယ် …
ဟုတ်ပါ့ အရင်ကလူတွေ သုံးနှစ်သုံးမိုးရှာမှ ရတာ .. အခုက သုံးမိနစ် သုံးစကန့် လောက်နဲ့ရတယ် တယ်လည်းကောင်းပါကလား…
တော်ပါသေးရဲ့ သားလေးမွေးထားလို့ ရင်မောရပါလားနော်။ ကိုယ်တွေတုန်းက သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း သူ့မိဘ ကိုယ့်မိဘ သူ့ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အားလုံးလေ့လာ ပြီးမှ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမယ် ထင်မှ အိမ်ထောင်ပြုတာ ဒါတောင် အတူနေမှ အရင်က မတွေးမိတဲ့ ပြသနာတွေက ၀င်သေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့ နှစ်ဦးတည်း ပေါင်းရတာ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးပါ ပေါင်းရတာမို့ အချိန်ယူပြီး လေ့လာတာတောင် တော်ရုံမကျဘူး။ သိတဲ့အတိုင်း သမီးရည်းစားဘ၀ ဆိုတာက အကောင်းဆုံးတွေပဲ ပြတာ အတူနေမှ အကျင့်ဆိုးတွေက ဗူးပေါ်သလိုပေါ်တတ်တာလေ။ အင်တာနက်က တွေ့ပြီး ယူတာတော့ သတ္တိရှိတယ်လို့ ချီးကြူးရမလား ဦးနှောက်မရှိလိုက်တာလို့ ပြစ်တင်ရမလား။
အင်တာနက်က တွေ့တယ် ဆိုတာ စိတ်အပန်းဖြေမှု အတွက် စွဲလန်းမှု တခုလို့ပဲ ထင်တယ်။
ထိုစွဲလန်းမှုကို အချစ်လို့ ယုံကြည်ပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် အာရကီးတွေ ရိုက်ပြီး မပြီးနိုင်အောင် ကြူ.. ထို့နောက်..
ထိုကဲ့သို့သော ဇတ်လမ်းတွေလည်း ကြားနေရတယ်။
လူတွေမတွေးဆနိုင်တဲ့ ဆန်းတဲ့ နည်းစံနစ်တွေ ပေါ်ကောင်းပေါ်လာပါလိမ့်မည် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအခါကျ အတိအကျ သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထိထိမိမိ ပြောပြမယ်ဗျ …